Booliska federaalka iyo ciidamada AMISOM oo howgal guryaha lagu gelayo ka bilaabay Marka – Radio Daljir
Booliska federaalka iyo ciidamada AMISOM oo howgal guryaha lagu gelayo ka bilaabay Marka
Agoosto 19, 2013 2:59 b 0
Marka, August 19, 2013 – Degmada Marka ee gobolka shabeelaha Hoose goor barqadii maanta ah, waxaa ka bilowday baaritaano ay wadaan ciidamada amaanka dowladda federaalka ah iyo kuwa u jooga howgalka AMISOM deegaankaas.
Wararka ka soo baxaya howgalkaas waxay sheegayaan in ciidamada amaanka ee dolwadda federaalka ah ay aad u galeen guryaha ku yaala xaafada Abu Raas.
Maamulka Marka waxay sheegeen in aysan muuqan ?is-bedel weyn oo jira, marka laga yimaado baaritaanada oo ku salaysan khartarta mar kasta jirta ee ah ururka Al-shabaab, kuwaas oo ku badan gobolka shabeelaha hoose.
Maxamed Cismaan (Yariisow) gudoomiyaha Marka wuxuu xusay in ciidamada amnigu ay guri guri u geli doonaan, xaafada Abu Raas oo ka tirsan degmada Marka, halkaas oo ka mid ah meelaha ay dadku ku badan yihiin.
Laamaha amaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa howgalka si buuxda u fulinaya, maamulku waxay sheegeen in ay shaacin doonaan natiijada ka soo baxda howgalkaas.
Gaashaandhiga barriga Afrika oo isla raadinaya Istaraatiyad amaanka looga wada shaqaynayo
WHO oo shaacisay in la talaalay 4 Million balse khatarta dabaysha ay ka jirto deeganada Shabaab